IINDLELA EZI-7 ZOKULUNGISA IBAR YOMSEBENZI KWI-FULLSCREEN - ITHAMBILE
Iindlela ezi-7 zokuLungisa ibar yomsebenzi kwi-Fullscreen
Lungisa i-Taskbar engazifihli kwisikrini esigcweleyo: Ibha yomsebenzi kwiifestile, ibha (ihlala ikhona emazantsi kwesikrini) egcina idatha ebalulekileyo njengomhla kunye nexesha lolwazi, ulawulo lwevolumu, ii-icon ezimfutshane, ibha yokukhangela, njl., Iyanyamalala ngokuzenzekelayo nanini na udlala umdlalo okanye ubukele ividiyo engacwangciswanga kwiscreen esigcweleyo. Oku kuyanceda ukubonelela abasebenzisi ngamava okuntywila ngakumbi.
Nangona, ibar yomsebenzi engazifihli / inyamalale ngokuzenzekelayo kwiinkqubo ezikwisikrini esipheleleyo ngumba owaziwayo kakhulu kwaye ibikhathaza Windows 7, 8, kunye no-10 ngokufanayo. Umcimbi awuthintelwanga ekudlaleni iividiyo ezikwisikrini esigcweleyo kwiChannel okanye kwiFirefox kodwa ngelixa udlala imidlalo. Uluhlu lweempawu eziqhwanyaza rhoqo kwi-Taskbar zinokuphazamisa, ukutsho nje okuncinci, kwaye zisuse kumava onke.
Ngethamsanqa, kukho iindlela ezimbalwa ezikhawulezayo nezilula zokufumana ibar yomsebenzi ebonisa umba osisikrini esipheleleyo, kwaye sizidwelisile zonke zingezantsi.
Uyilungisa njani i-Taskbar ebonisa kwiscreen esigcweleyo?
Lungisa Windows 10 Ibha yomsebenzi engazifihli kwisikrini esigcweleyo
Indlela yoku-1: Khubaza ibar yomsebenzi
Indlela yesi-2: Qala kabusha inkqubo ye-explorer.exe
Indlela yesi-3: Yenza i-Taskbar ifihle ngokuzenzekelayo
Indlela yesi-4: Cima Iziphumo eziBonakalayo
Indlela yesi-5: Nika amandla ukuBhala ngaphezulu kokuziphatha okuphezulu kwe-DPI ye-Chrome
Indlela yesi-6: Khubaza ukukhawulezisa izixhobo kwi-Chrome
Indlela yesi-7: Jonga uHlaziyo lweWindows lweWindows
Esona sisombululo sixhaphakileyo kwingxaki ekhoyo kukuqalisa inkqubo ye-explorer.exe kuMphathi woMsebenzi. I-Taskbar nayo ayinakufihla ngokuzenzekelayo ukuba uyitshixe endaweni yayo okanye usalindele uhlaziyo lweWindows. Ukucima zonke izinto ezibonakalayo (oopopayi kunye nezinye izinto) kuye kwaxelwa ukuba kusonjululwe umba kubasebenzisi abambalwa.
iqela aliphumelelanga ukongeza ilungu
Unokuzama ukugqithisa ngaphezulu kokuziphatha okuphezulu kwe-DPI okanye ukukhubaza ukukhawulezisa izixhobo kwiChannel ukuba iTaskbar yakho ayifihli ngokuzenzekelayo xa udlala ividiyo kwiscreen esigcwele kwisikhangeli sewebhu.
Phambi kokuba siqale, zama ukuqala kwakhona ikhompyuter yakho okanye ucofe zonke ii-icon ezimfutshane kwi-Taskbar ukujonga ukuba uyayilungisa na. Unako kwakhona Cinezela F11 (okanye fn + F11 kwezinye iinkqubo) ukuya tshintshela kwimowudi yekhusi elipheleleyo kuzo zonke izicelo.
' Tshixa ibar yomsebenzi ’Yenye yeempawu zebar yomsebenzi entsha eziswe kwiWindows OS kwaye ivumela umsebenzisi ukuba ayitshixe endaweni kwaye akhusele ukuyihambisa ngengozi, kodwa ayeke neTaskbar ekunyamalaleni xa utshintshela kwimowudi yesikrini esigcweleyo. Xa itshixiwe, ibar yomsebenzi iya kuqhubeka kwiscreen ngelixa igqume kwisicelo esigcweleyo.
Ukuvula ibar yomsebenzi, yiza nemenyu yokuma nge Ukucofa ekunene naphi na kwi-Taskbar . Ukuba ubona itsheki / phawula ecaleni kwe Tshixa ukhetho lwebar yomsebenzi , kuthetha ukuba inqaku liyasebenza. Cofa nje ngokulula ‘Tshixa ibar yomsebenzi’ ukukhubaza inqaku kunye nokuvula ibar yomsebenzi.
Inketho yoku tshixa / vula ibar yomsebenzi inokufunyanwa kwi- Useto lweWindows> Ukwenza ubuqu> Umsebenzo .
Uninzi lwabasebenzisi bacinga ukuba inkqubo ye-explorer.exe ixhalabele kuphela iWindows File Explorer, kodwa ayiyonyani leyo. Inkqubo ye-explorer.exe ilawula yonke imbonakalo yomsebenzisi kwikhompyuter yakho, kubandakanya iFayile Explorer, iTaskbar, imenyu yokuqala, idesktop, njl.
Inkqubo eyonakeleyo yokuhlola.exe inokukhokelela kwimicimbi yemizobo efana ne-Taskbar engazukunyamalala ngokuzenzekelayo kwisikrini esigcweleyo. Ukuqala kwakhona inkqubo inokusombulula nayiphi na imiba enxulumene nayo.
1. Qalisa uMphathi weMisebenzi yeWindows ngayo nayiphi na kwezi ndlela zilandelayo:
a. Cinezela Ctrl + Shift + ESC Izitshixo kwibhodi yakho yezitshixo ukwazisa ngqo usetyenziso.
b. Cofa kwiqhosha lokuqala okanye kwibar yokukhangela ( Isitshixo seWindows + S ), chwetheza Umlawuli womsebenzi , kwaye ucofe Vula xa uphendlo lubuya.
c. Cofa ekunene kwiqhosha lokuqala okanye ucinezele Isitshixo seWindows + X ukufikelela kwimenyu yomsebenzisi wamandla kwaye ukhethe Umlawuli womsebenzi ukusuka apho.
d. Unako kwakhona vula uMphathi woMsebenzi ngokunqakraza ekunene kwi-Taskbar kwaye ukhethe ngokufanayo.
2. Qinisekisa ukuba ukwi Iinkqubo Isithuba soMphathi woMsebenzi.
3. Khangela indawo Windows Explorer inkqubo. Ukuba unefestile evula indawo evulekileyo ngasemva, inkqubo iya kuvela phezulu kuluhlu oluphantsi kweeNkqubo.
4. Nangona kunjalo, ukuba awunayo i- iwindow esebenzayo yoMhloli Kuya kufuneka uskrole kancinci ukufumana inkqubo efunekayo (phantsi kweenkqubo zeWindows).
5. Unokukhetha ukuPhelisa inkqubo yokuKhangela kunye nokuqalisa kwakhona ikhompyuter yakho ukuze iphinde iqale inkqubo iphinde isebenze kwakhona okanye uyiqale kwakhona inkqubo ngokwakho.
ukulungisa iTunes kwi windows 10
6. Sikucebisa ukuba uqale inkqubo kwakhona, kwaye ukuba oko akuyisombululi ingxaki ekhoyo, yiphelise.
Ukuqala kwakhona inkqubo yeWindows Explorer, cofa ekunene kuyo kwaye ukhethe Phinda Uqalele . Ungaqala kwakhona ngokunqakraza kwiqhosha lokuqalisa kwakhona ezantsi kwe Task Manager emva kokukhetha inkqubo.
8. Yiya phambili kwaye usebenze usetyenziso apho i-Taskbar igcine ukubonisa nangona ikwisikrini esigcweleyo. Jonga ukuba uyakwazi na lungisa i-Taskbar iboniswe kwiphepha elipheleleyo lesikrini. Mnaf Isabonisa, Qeda inkqubo kwaye uqalise kwakhona ngesandla.
Ukuphelisa inkqubo, cofa ekunene kwaye ukhethe Ukuphelisa umsebenzi ukusuka kwimenyu yokuma. Ukuphelisa inkqubo yeWindows Explorer kuya kubangela i-Taskbar kunye ne-graphical interface yomsebenzisi ukuba inyamalale ngokupheleleyo de ube uqala inkqubo kwakhona. Isitshixo seWindows kwikhibhodi yakho siyakuyeka ukusebenza de kube ukuqala kwakhona okulandelayo.
10. Cofa apha Ifayile phezulu ngasekhohlo kwiWindows Task Manager kwaye ukhethe Qalisa umsebenzi omtsha . Ukuba ngempazamo uvale iwindow yoMphathi woMsebenzi, cinezela u-ctrl + shift + del kunye noMphathi woMsebenzi okhethiweyo kwiscreen esilandelayo.
11. Kwibhokisi yokubhaliweyo, chwetheza umkhangeli.exe kwaye ucinezele Kulungile iqhosha ukuqala kwakhona inkqubo.
Funda kwakhona: Ndiyisusa njani ibar yomsebenzi wam emva emazantsi kwesikrini?
Unako ukwenza ifayile ye Fihla ngokuzenzekelayo ibar yomsebenzi ukusombulula umba okwethutyana. Ngokwenza ukufihla okuzenzekelayo, ibar yomsebenzi iya kuhlala ifihliwe ngaphandle kokuba uzisa isikhombisi semouse kwicala lesikrini apho ibar yomsebenzi ibekwe khona. Oku kusebenza njengesisombululo sethutyana njengoko umba uya kuqhubeka ukuqhubeka ukuba ukhubaza inqaku lokufihla ngokuzenzekelayo.
1. Vula iiSetingi zeWindowsngokunqakraza kwiqhosha lokuqala uze emva koko ucofe i icon yezicwangciso (cogwheel / icon yegiya) okanye usebenzise indlela emfutshane yezitshixo Isitshixo seWindows + mna . Unokukhangela kwakhona izicwangciso kwibar yokukhangela uze ucinezela ukungena.
2. Kwi Useto lweWindows Cofa apha Ukwenza umntu .
3. Ezantsi kwepaneli yokuhambisa kwicala lasekhohlo, uya kufumana Ibar yomsebenzi . Cofa kuyo.
(Ungafikelela ngqo kuseto lwebar yomsebenzi ngokunqakraza ekunene kwi Ibar yomsebenzi kwaye ukhethe okufanayo.)
4. Ekunene, uya kufumana iindlela ezimbini zokufihla ngokuzenzekelayo . Inye xa ikhompyuter ikwimo yedesktop (imo eqhelekileyo) kunye nenye xa ikwimowudi yethebhulethi. Nika amandla zombini iindlela ngokunqakraza kutshintsho lwabo lokutshintsha.
IWindows ibandakanya inani lezinto ezibonakalayo zokusebenzisa i-OS ngakumbi. Nangona kunjalo, ezi ziphumo ezibonakalayo zinokungqubana nezinye izinto ezibonakalayo ezinjenge-Taskbar kwaye zikhokelele kwimicimbi ethile. Zama ukukhubaza iziphumo ezibonakalayo kwaye ujonge ukuba uyakwazi na lungisa i-Taskbar iboniswe kumcimbi oGcwele isikrini:
1. Vula iPaneli yokuLawula Ngokuchwetheza ulawulo okanye ipaneli yokulawula kwibhokisi yomyalelo wokuSebenza (isitshixo seWindows + R) emva koko ucofe u-Kulungile.
2. Kuzo Zonke izinto zePhaneli yoLawulo, cofa apha Inkqubo .
Kwiinguqulelo zangaphambili zeWindows, umsebenzisi kuya kufuneka kuqala avule Inkqubo kunye noKhuseleko kwaye ukhethe Inkqubo kwifestile elandelayo.
(Unako kwakhona ukuvula ifayile ye- Inkqubo yefestile , ngokucofa ekunene kwi Le PC kwiFayile Explorer kunye nokukhetha iiProperties.)
3. Cofa apha Useto lwenkqubo oluphambili ikhona kwicala lasekhohlo le- Inkqubo yefestile .
iTunes ayiphenduli windows 10
4. Cofa u Useto iqhosha elikhoyo phantsi kwecandelo lokuSebenza le Useto oluphambili .
5. Kule festile ilandelayo, qinisekisa ukuba ukwifayile ye Iziphumo ezibonakalayo tab kwaye ukhethe i Lungisa ukusebenza kakuhle ukhetho. Ukukhetha ukhetho kuya kukhuphela ngokuzenzekelayo zonke iziphumo ezibonakalayo ezidweliswe ngezantsi.
6. Cofa apha Faka isicelo iqhosha kwaye uphume ngokunqakraza kwiqhosha lokuvala okanye Kulungile .
Funda kwakhona: Uyongeza njani iI icon yeDesktop kwiTaskbar ngaphakathi Windows 10
Ukuba ibar yomsebenzi engafihlanga ngokuzenzekelayo isebenza kuphela ngelixa udlala iividiyo ezikwisikrini esigcweleyo kuGoogle Chrome, unokuzama ukwenza ukuba ngaphezulu kokuziphatha okuphezulu kwe-DPI.
1. Cofa ekunene kwi icon yeGoogle emfutshane kwi-desktop yakho kwaye ukhethe Iipropati ukusuka kwimenyu yokuma.
2. Hambisa kwi Ukuhambelana isithuba seeProperties kwaye ucofe kwi Guqula useto oluphezulu lwe-DPI iqhosha.
3. Kule festile ilandelayo, Tshekisha ibhokisi esecaleni kokuPhezulu kokuziphatha okuphezulu kwe-DPI .
4. Cofa apha Kulungile ukugcina utshintsho kunye nokuphuma.
Jonga ukuba uyakwazi na lungisa i-Taskbar iboniswe kwiphepha elipheleleyo lesikrini . Ukuba akunjalo, qhubeka nendlela elandelayo.
igalelo alixhaswanga windows 7
Elinye iqhinga ekusombululeni imiba yesikrini esigcweleyo kwiChannel kukukhubaza ukukhawulezisa izixhobo zehardware. Inqaku lilungelelanisa eminye imisebenzi njengokulayisha iphepha kunye nokunikezela kwiprosesa ukuya kwi-GPU. Ukukhubaza inqaku kuyaziwa ukulungisa imiba nge-Taskbar.
1. Vula iGoogle Chrome ngokunqakraza kabini kwi icon yayo emfutshane okanye ngokukhangela efanayo kwi-bar yokukhangela yeWindows kwaye ucofe Vula.
2. Cofa kwi amachaphaza amathathu amileyo (okanye imivalo ethe tye, kuxhomekeke kuhlobo lweChannel) kwikona ephezulu ngasekunene kwewindow ye-Chrome kwaye ukhethe Useto ukusuka kwimenyu ehlayo.
3. Unako ukufikelela Useto lweChannel ngokundwendwela le URL ilandelayo chrome: // useto / kwithebhu entsha.
Skrolela yonke indlela ezantsi ukuya esiphelweni Iphepha lezicwangciso kwaye ucofe ku Phambili .
(Okanye ucofe kwi Useto oluphambili ukhetho ikho kwiphaneli yasekhohlo.)
5. Phantsi kweZicwangciso zeNkqubo ePhucukileyo, uya kufumana ukhetho ukwenza ukuba ukukhubaza ukukhawuleziswa kweHardware. Cofa kutshintsho lokutshintsha ecaleni kokuSebenzisa iiHardware zeHardware xa zikhona ukuyicima.
6. Ngoku, qhubeka udlale ividiyo yeYouTube kwisikrini esigcweleyo ukujonga ukuba ibar yomsebenzi iyabonakala na. Ukuba iyenzeka, unokufuna ukuseta kwakhona i-Chrome kuseto lwayo olungagqibekanga.
7. Ukuseta kwakhona i-Chrome: Fumana indlela eya kwiiSetingi eziPhucukileyo zeChannel usebenzisa le nkqubo ingentla kwaye ucofe kwi ‘Buyisela useto kokungagqibekanga kwabo kwasekuqaleni’ phantsi kwe- Hlela kwakhona kwaye ucoce icandelo . Qinisekisa isenzo sakho ngokunqakraza kwi Hlela kwakhona izicwangciso pop-up elandelayo.
Ukuba akukho nanye kwezi ndlela zichazwe apha ngasentla zikusebenzele, kunokwenzeka ukuba kukho ibug esebenzayo kwiWindows yakho eyakha ethintela Ibar yomsebenzi ekunyamalaleni ngokuzenzekelayo, kwaye ukuba kunjalo ngenene, iMicrosoft ikwakhuphe uhlaziyo olutsha lweWindows ukulungisa ibug. Konke okufuneka ukwenze kukuhlaziya ikhompyuter yakho ukuze isebenze kuhlobo lwamva nje lweWindows. Ukuhlaziya iWindows:
1. Vula useto lweWindows ngokucinezela Isitshixo seWindows + mna .
2. Cofa apha Uhlaziyo kunye noKhuseleko .
3. Ukuba kukho uhlaziyo olukhoyo, uya kwaziswa malunga nokufanayo kwiqela elisekunene. Ungajonga ngesandla uhlaziyo olutsha ngokunqakraza kwi Jonga uvuselelo iqhosha.
4. Ukuba lukhona uhlaziyo olukhoyo kwiNkqubo yakho, zifakele, nasemva kofakelo, jonga ukuba ngaba Ibar yomsebenzi Ukubonisa ingxaki yesikrini esipheleleyo kusonjululwe.
umshicileli we-canon kwimeko yeempazamo windows 10
Makhe nathi sonke abanye abafundi sazi ukuba zeziphi kwezi zisombululo zidweliswe apha ngasentla zisombulule i-Taskbar ebonisa kwimicimbi yesikrini esigcweleyo kwicandelo lamagqabaza.
Vula iFowuni ye-Android ukuba uyilibele iphasiwedi okanye ipateni yokutshixa
Iindlela ezi-3 zokuKwenza okanye ukukhubaza iHibernation kwi Windows 10
Uyenza kanjani iGoogle feed kwiNova Launcher
Ndiyathemba ukuba isifundo esingentla sasiluncedo wakwazi Lungisa i-Taskbar iboniswe kumcimbi oGcwele isikrini . Kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sifundo emva koko uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
windows 10 ukufaka iindawo zokumisa ezingama-99%
I-hdmi port ayisebenzi windows 10
Umqhubi we-nvidia ophazamisa iiwindows 10 2018
akukho ndlela yesango emiselweyo windows 10
kuthetha ntoni ukusombulula iindwendwe
UChrome usebenzisa i-cpu kakhulu
yongeza umsebenzisi kwiwindows 10 ngaphandle kwe-imeyile